Ndremitsara Tarzan : « Ilaina ny antontanisa raha te handroso » | NewsMada
Ndremitsara Tarzan : « Ilaina ny antontanisa raha te handroso »
Nambaran’ny tale misahana ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana, Ndremitsara Tarzan, tetsy Anosy fa ilaina ny fanavaozana ny torohay momba ny fikirakirana azy io. « Efa betsaka no lany andro ka mila fanatsarana. Tomponandraikitra feno ny olom-pirenena momba ny fanomezana ny antontam-baovao. Ny mampalahelo, kely ny sazy ho an’ireo olona tsy manome antontam-baovao momba ny antontanisa io », hoy izy. Nanteriny fa ahafahana mandray fanapahan-kevitra ho fampandrosoana ny firenena ny fananana antontanisa azo antoka. Navoitran’ity tale ity koa ny voka-dratsy amin’ny tsy fananana izany. Misalasala ireo mpamatsy vola handefa ny volany aty amintsika, ho fanampiana ny firenena mahantra toa an’i Madagasikara raha tsy marin-toerana io antontanisa io, araka ny nambarany. « Tsy afa-manao fampitahana amin’ny firenen-kafa isika raha tsy misy antontanisa mazava. Ilaina ny fananana antontanisa azo antoka, manoloana ny fanampiana avy any ivelany na avy amin’ny mpiara-miombona antoka na koa ho an’ny sehatra tsy miankina aza », hoy ihany izy.
Ahafahana mandrafitra tetikasa fampandrosoana
Ankoatra izany, hiezaka ny Instat hamita mialoha ny faran’ny taona ny volavolan-dalàna hoenti-manatsara sy hanavaozana momba ny antontanisa. « Efa misy ireo manampahaizana iraisam-pirenena mamolavola azy io miaraka amin’ny mpahay lalàna eto an-toerana mikarakara izany », hoy ny tale Ndremitsara Tarzan. Anisan’ny handray anjara amin’izao fanavaozana izao koa ny rehetra.
Tsiahivina fa efa mandeha ny fanisana ny mponina manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Isaky ny folo taona ny fanisam-bahoaka, saingy noho ny toe-draharaha nisy teto amin’ny firenena, izao vao raikitra ny fanisana ny mponina, tokony ho natao tamin’ny taona 2009. Miteraka olana hatrany amin’ny fandrafetana ny tetikasam-pampandrosoana ny tsy fisian’ny antontanisa mazava.